PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-11-25 - UDe Lille angamelana noMalema: umhlaziyi
UDe Lille angamelana noMalema: umhlaziyi
Isolezwe ngeSonto - 2018-11-25 - IMIBONO - THEMBA NTSHINGILA
IZINKINGA ezikhona kwezepolitiki kuleli zenza ukhetho lukazwelonke lwangonyaka ozayo lubukeke luza nezinselelo eziningi kwezepolitiki.
Ezinye zalezi zinselelo zidalwa wuguquko olwenzekayo kuleli, olwenza umuntu azibuze ukuthi ngabe kusasa kuyothi kusa kube kuyiziphi izindaba ezizobe zihlaba umxhwele kwezepolitiki.
Izindaba zakamuva zokusula esikhundleni kukaNkk Patricia de Lille ekubeni yimeya yaseCape Town nokuba yilungu leDA, ngezinye zezinselelo ezizokwenza lolu khetho lushube.
Emva kokushiya kukaNkk De Lille obeyilungu leDA, umemezele ukuthi emasontweni amabili ezayo, uzomemezela igama leqembu lakhe elisha lezepolitiki. Eshiya ekuzihlanganiseni neDA uNkk De Lille ubalule izizathu zokuhlukumezeka kule nhlangano. Ubale nokungabongi kwayo ngomsebenzi aseyenzele yona, kunalokho yamsola ngenkohlakalo.
Abahlaziyi bezepolitiki bayavumelana ngokuthi bese kuyisikhathi sokuthi uDe
Lille ashiye kwiDA ngoba ubekhahlelwa nxazonke.
UMnuz Xolani Dube ongumhlaziyi wezepolitiki esikhungweni iXubera Institute, ukholwa wukuthi uDe Lille akazesulelanga ngoba ethanda.
‘‘Empeleni iDA imxoshile. Ngikholwa wukuthi kunesivumelwano abafinyelele kusona ngokuthi bamnikeze okuthile ukuze ahambe,” kusho uDube.
Uthe ubengeke esakwazi ukuhlala kule nhlangano ngenxa yokuthi ubesengqubuzane kakhulu ngemibono nabathile kuyona.
Ebuzwa ukuthi akhona yini amathuba okusimama kwakhe kwezepolitiki kuleli, uthe kunabantu abayohlale bemlandela kumnyama kubomvu.
“Noma ubani othandayo kuleli angazisungulela iqembu lezepolitiki uma ethanda. Bakhona naye abazomvotela abazochayisa i-ANC ne-EFF,” kuchaza uDube.
Uthe kunabathile abazobona amathuba emisebenzi nokulethwa kwezidingo emphakathini ngokusungula kwakhe leli qembu, bese beyamvotela.
“Kulesi sikhathi samanje noma ngabe yiliphi iqembu lezepolitiki lifana nesitolo esilethela abantu izidingo,” usho njalo.
Eqhathanisa ibanga likaDkt Makhosi Khoza osaphonsa ithawula kwezepolitiki nebanga eselihanjwe uNkk De Lille, uDube uthe laba ngabaholi ababili abangefani.
“UNkk De Lille usemnkantshubomvu kwezepolitiki angamelana noMnuz Julius Malema. Usengaqhudelana noMalema ngokuthola imininingwane kwabathile ngaphakathi kwi-ANC ukuze agcine iqembu lakhe laziwa kwezepolitiki.”
Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uMnuz Thabani Khumalo, uthe uNkk De Lille ushiswe yisihlalo abehleli kuso, wabona kungcono esule kwiDA. “Ubekhombisa ukuhlukumezeka. Uzizwe engasenandawo kuDA.”
Uthe okwenzeke kuNkk De Lille, kuyefana nokwenzeka kuNksz Lindiwe Mazibuko osashiya kule nhlangano ngezinsolo zokungezwani nabaholi bayo abamhlophe.
NgokukaKhumalo, kuwumkhuba wayo iDA ukuthi ikumfimfithe, uma isiqedile ikulahle. Uthe nomholi wayo kuzwelonke uMnuz Mmusi Maimane, izinsuku zakhe zibaliwe kule nhlangano njengoba emnyama, uma izibalo zakamuva zokwehla kokwesekwa kweDA kungabambelelwa kuzona.
Mayelana nokuzuza abavoti, uthe maningi amathuba okuthi iqembu likaNkk De Lille elisha lihleke lodwa.
“Imibhikisho yakamuva yamakhaladi eWestern Cape naseGauteng lapho abezwakalisa khona ukungabhekelwa ekulethelweni izidingo nokuhlushwa ubugebengu, ngezinye zezinto ezizokwenza kube lula ukuthi athole amavoti,” kuchaza uKhumalo.
Uthe kubukeka uNkk De
Lille ezowatshela amakhaladi ukuthi abekusho bekukhala ngakho bekuyiqiniso, ngakho-ke awamlandele njengoba esesungule iqembu elisha.
NgokukaKhumalo, amakhansela asula ngoba eseka uNkk De Lille kwiDA, yiwona azomenzela umsebenzi wakhe ube lula emazingeni aphansi.
“Maningi amathuba okuthi athathele iDA amavoti ikakhulukazi eWestern Cape. Amanye amaqembu angagcina esekhothama kuyena ukuze kusetshenziswane komasipala,” usho kanje.
USolwazi Somadoda Fikeni, uthe kusobala ukuthi uNkk De Lille ushiye kwiDA sekukubi ephoqwa.
Ebuzwa ukuthi uzobathola yini abantu abazomvotela, uthe maningi amathuba alokho.
“Uzokwazi ukuqhudelana namaqembu amakhulu futhi uzobathola abazomvotela,” kusho uFikeni.
Wenze isibonelo ngeqembu i-AIC, wathi lakwazi ukugila izimanga lizifika kwipolitiki, uNkk De Lille uzovunwa wukuthi akayena umafikizolo kwezepolitiki.
“Abantu abazomvotela yilabo ebebemeseka eseyimeya nelungu leDA. Abanye kuzoba abantu abasha abazwelana naye,” usho njalo.
Ngokuka Fikeni, uMthethosisekelo wakuleli uyakuvuma ukuthi kube namaqembu ahlukene azongonela ukhetho, ngakhoke nabanye abasengaqhamuka bazisungulele awabo, akukho okubavimbayo.
Ngaphambi kokuthi uNkk De Lille aqhamuke nombono wukusungula iqembu lezepolitiki, wayethe usazodla amathambo engqondo kuqala ngoba ziningi izinhlangano ezifuna ukusebenzisana naye, abala phakathi kwazo nezingenzi nzuzo.
UNkk DeLille uthe iqembu lakhe lizogxila kakhulu ekufukuleni ikusasa labantu abasha kuleli.
Ngaphandle kokugxila kubantu abasebasha, uthe kubalulekile ukuthi leli lizwe libe nabantu abaziyo ukuthi kumele izwe liphathwe kanjani, ngoba uma kungenjalo, lizobhekana nenhlekelele.
UNKK Patricia de Lille obeyiMeya yaseCape Town okuwumkhandlu ophethwe yiDA osesulile kulesi khundla nasekubeni yilungu leDA. Usanda kumemezela ukuthi emasontweni amabili ezayo uzomemezela igama leqembu lakhe elisha lezepolitiki elizongenela ukhetho lukazwelonke ngonyaka ozayo Isithombe: DAVID RITCHIE/AFRICAN NEWS AGENCY/ANA